WAA MAXAY SABABTA UU BAKAYGU U CUNO BAKAYLIHIISA KA DIB MARKA UU SOO BAXO - XOOLAHA
Maxay noqon kartaa mid aad u fiican marka loo eego bakayle? A yar oo bakayle ah. Waa qurux badan yihiin, xiiso leh iyo daawashada waa raaxo. Nooca shoogga ah ee nooca breeder waxay noqon kartaa xaqiiqda ah cunista iyo baabi'inta dhasheeda cusub ee by hooyada cute iyo bakayle. Qodobkani waxaan tixgelineynaa sababaha ugu muhiimsan ee habdhaqanka xun ee haweenka.
Waa maxay sababta bakayle
Si loo bilaabo, waa in la ogaadaa in genetically, ee bakaylaha haweenka ee nooc kasta, dareenka hooyada waa mid aad u horumarsan. Kadib markaad dhaleysid, waxay daryeeli karaan faraca, waxay baraan madaxbannaanida. Waa lagama maarmaan in la xusuusto in aysan jirin sabab ay haweenku u dhaqmeen sidan. Sababtuna waxay noqon kartaa wax badan. Badanaa waa cilladda nafaqada. Bal qiyaas haddii qof bakayle ah oo gaajeysan, oo uu ka badbaaday walbahaarka jidhka ee qaabka dhalmada, waxaa laga yaabaa in laga yareeyo oo aan loo aqoonsan karin carruurta caruurteeda ah. Markaa dareenka baahida gaajada qaadata. Sababta ugu weyn ee diidmada caruurnimada ilmaha waa joogitaanka urta shisheeye. Sidaa darteed, qofku waa in uusan taaban ilmaha cusub. Intaa waxaa dheer, bakayli hooyada oo aan taqasuseyn oo kaliya ayaa carqaladeeyn karta caruurtooda. Dabcan, ma ahan hadaf. Dadaal si loo ilaaliyo ama loo kululeeyo, ma sahlana xisaabinta cabbirkeeda. Aan u fiirsanno sababaha habdhaqanka noocan ah ee bakaylaha ka dib dhalashada si ay u hubiyaan beerahooda intii suuragal ah.
Dib-u-qaadidda bakaylaha ilmaha
Ka feker sababta ay bakayle u diidi karto inay ku quudiso dhajiskeeda, iyo sidoo kale sababaha dhaqanka noocan ah iyo cawaaqibkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan: sida loo sii wado carruurta oo looga hortago geeridooda. Dhimista marin kasta, si dhakhso ah ama ka dib, waxaa laga yaabaa in lagu wajihi karo xaqiiqda ah in dhalashada ka dib markaad dhalayso aysan u oggolaanin dhaladka inay u yimaadaan quudinta. Khatarta kiiskan waa mid cad. Caanaha hooyada, bakaylaha ayaa dhiman doona. Aan eegno sababaha keena iyo sida loola macaamilo iyaga si loo badbaadiyo nolosha caruurta.
Ma taqaanaa? Cunto khafiif ah waa mid cajiib ah. Sidaa daraadeed, celceliska celcelisku wuxuu cuni karaa hal cunto ah mugga cawska qiyaastii 40 * 40 * 15 cm, taas oo ka sarraysa cabbirkeeda.
Khabiiro badan ayaa sharaxaya kiisaska soo noqnoqda halka haweenayda isla markiiba dhalashada kadib ay rabto mar kale. Tani, waxay u egtahay, ma jirto wax xun, laakiin waxa sabab u ah hawlaha kordhay oo aan kaliya maaha in ay carqaladeeyaan bakaylaha, laakiin sidoo kale ma rabto in ay ku quudiyaan dhammaantood. Ma yaabsan, sababtoo ah madaxeeda waxaa lagu qabtaa waxyaabo gebi ahaanba kala duwan, iyada oo dareenkeedana waxaa lagu tilmaamaa si sax ah. Xaaladdan, bakayle wuxuu noqon karaa ilaa saddex maalmood. Laakiin kaliya haddii 3 maalmood ma quudiyaan farcan - ma noolaan doonaa. Maxaa, ka dib, waxaa lagu taliyaa by jilayaasha khibrad leh? First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah si loo sugo bakaylaha. Inta badan, waxaa si fudud loo wareejiyaa buulkarka bakayle kale oo rusheeyaa. Tani waa lagama maarmaan si ay u aqoonsato ninkeeda. Sidaa awgeed, carruurtu waa la daryeeli doonaa. Laakiin bakayle, oo ah "wax xun," waxaad si ammaan ah u xiri kartaa ragga. Sida ugu fiican oo dhan, haddii ay tahay bakayle leh wax soo saar yar. Sidaas awgeed waa lagaa badbaadin doonaa oo aanad rabin, aadna uur leedahay, oo qoyaankuna wuu xasilan yahay.
Sabab kale waxaa loo yaqaan naasaha dumarka ah ee adag. Natiijadu waa xanuun. Xaaladdan oo kale, bakaylaha waxaa lagu dejiyaa buulkale kalkaaliye kale, isla markaana waxaad ku daadi kartaa ibta naas nuujin leh saliid (khudradda) ama cadar gaar ah oo si tartiib ah u duugi maqaarka agagaarka. Nidaamkani wuxuu keenaa natiijooyin si dhakhso ah, carruurtana waxaa lagu celin karaa hooyadooda.
Waa muhiim! U hubso inaad taxadarto nidaamka quudinta, gaar ahaan maalmaha hore. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in haddii ilmuhu nafaqo darro yahay, waxay noqon kartaa mid u nugul cudurka, haddii ay u egtahay, waxay ka dillaaci kartaa xubnaha gudaha. Hooyada, marka hore, waxay u baahan tahay caanaha in loo isticmaalo intii suurtogal ah. Haddii ay sii jirto, markaas mustaqbalka jirka haweenku ma soo saari doono tiro ku filan oo ay ku quudiyaan dhammaan bakayasha. Caano qoyan ayaa sidoo kale ka xanaajin kara naaso.
Intaa waxaa dheer, bakaylaha, sida xayawaan kasta, waxay aad u dareen u ah ur. Haddii gabadhu uriso ur aan caadi aheyn oo aan fiicnayn iyada, way ku xumaanaysaa, bilaabi doontaa inay dareemaan cabsi iyo diidaan inay ku quudiyaan dhererka. Si aad u ilaaliso xayawaanka, waa in aad hubsatid in meeshii qafisku istaago, ma jiraan wax ur ah liiska soo socda:
Haseyeeshe, waxaa jira kiisaska marka bakteeriyadu aysan si fudud u nadiifin karin dhamaan bakaylaha. Xaaladdan, khubarada ayaa kugula talinaya in loo qaybiyo buulka. Tani waxay ka dhigan tahay in tirooyinka dhererka ee dhowr dabeecadood la siman yahay si ilmuhu u helo nafaqo ku filan. Intaa waxaa dheer, waxaad weli tarjumi kartaa bakaylaha cuntada quudinta, laakiin in la sameeyo iyada oo aan degdeg ahayn waa mid aan loo baahnayn.
Qof walba waa ogyahay in bakaylaha ay cabsanayaan. Oo wax walbana way ka baqi doonaan. Inta badan, rabbiiyadu waxay jarjaraan dharkooda, maadaama ay rabaan wax badan, waa ficil aan dhammaad lahayn.
Waa muhiim! Waxaa muhiim ah in aan la siin sonkorowga iyo macmacaanka. Waa wax walba oo ku saabsan heerka wadnaha. Sidaa daraadeed, nabarka caadiga ah ee noocyada kala duwan ee xayawaanka la duubay iyo in qaab kale oo ruuxu yahay 130-325 garaaca / min. Marka la barbardhigo, heerka garaaca wadnaha waa 60-70 garaaca / min. Iyadoo la isticmaalayo heerarka gulukoosta macaan ee dhiiga ayaa kordhisa garaaca wadnaha. Natiijadu waxay noqon kartaa shaqo joojin wadnaha ah. Ha siin sonkorta bakaylaha!
Sababaha xayiraaddu waxay noqon kartaa dhowr:
Meel la'aan. Lama yaabin in caanuhu si xoogan u soo jeediyaan in haweeneyda uurka leh loo wareejiyo qafis weyn. Haddii haweenku aanay lahayn meel ku filan oo ay ku noqoto qafiska, dabcan, kuwa yaryar waxay dhibsan karaan tan.
Cabsi. Haddii bakeylku uu cabsado wax ama ay dareemayso nooc ka mid ah hanjabaad, waxay bilaabi kartaa in qashin ku wareegsan qafiska si joogto ah.
Dareemo la'aan. Bakayle yar ka dib dhalashada koowaad ama laga yaabo inaanu xisaabin awood, ama aan haysan xirfado ku filan oo lagu maareeyo carruurta daryeela.
Cudurka. Cilmi-baarisu waxay ogyihiin cudurrada ay haweenku noqdaan kuwo aan la xakameyn karin waxayna waxyeeleyn karaan cunugyada bakaylaha.
Si kastaba ha ahaatee, haddii dhirta la ogaado in bakaygu uu si joogta ah u dhaqmo, waa inaad isla markiiba qaadataa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo badbaadiyo bakayleka oo hubi inaad ogaatid sababaha. Ka dib oo dhan, oo kaliya marka la ogaado sababaha, waxaad si tayo leh wax uga qaban kartaa cawaaqibka.
Video: bakaylaha bakaylaha lafdhabarta
Wuxuu cunaa bakaylaha yaryar
Waxaa jira xaalado marka, ka dib markaad dhaleysid ka dib, aad u soo dhawaato qafiska oo arag halkaas oo keliya bakayle. Muxuu u dhaqmaa sidan? Waxaa jira sababo dhowr ah:
waxa ugu horreeya ee maskaxda ku haya, iyo in kor lagu sharaxay - harraad, ma ahan kaliya inta lagu jiro xilliga uurka iyo nuujinta, haweenku waxay u baahan tahay nafaqo wanaagsan waxayna nadiifisaa biyo cusub iyada oo aan xaddidno.
bakayle ayaa cunta qayb ka ah dharkeeda iyo dhacdadaas waxay ka warqabtaa caano la'aanta in ay ku quudiyaan qof kasta;
khabiirada ugu caansan ayaa wacaya dhalashada ee bakaylaha dhintay: urka cadawga waa mid aad u xoog badan oo soo jiidata tiro badan oo ka mid ah geela, isagoo ka takhalusay ilahaas oo kale, bakeylku wuxuu ilaaliyaa caruur nool.
Ka daawo bakaylahaaga si taxadar leh si aad uga hortagto faraca cunnada.
Soo ogow sababta mashiinnada bakaylaha ay bakeylayaashu u boodaan ka dib markay beerta u dhaqmaan ayna u dhaqmaan si xad dhaaf ah.
Waxa la sameeyo si looga hortago dhacdooyinka noocaas ah
Si aad u ogaato tirada bakaylaha badbaadada in ay ahaato ugu badnaan, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerar dhowr ah:
Sida ugu dhakhsaha badan haweenka uurka leh ayaa la xaqiijiyay - markiiba u guurto qafis weyn.
Kafka laftiisa waa in uu ahaado meel xasilan, iyada oo aan si fudud loo helin hawo cusub.
Turjubaan u qaad cuntooyinka degdegga ah (waxaa jira caadooyin gaar ah oo loogu talagalay bakayleyda uurka leh ee nooc kasta).
Ha ilaawin in haweenku had iyo jeer ay leeyihiin biyo cusub oo aan xad lahayn.
Iska ilaali dhawaaqyada codka leh iyo kuwa adag.
Marnaba ha taaban dhalaanka haddii aan loo baahnayn.
Haddii baahidaas oo kale loo baahdo, ka dibna samee waxyaabaha soo socda:
Gacmaha si fiican ugu dhaq saabuun.
Ka samee wax yar oo cagaaran oo u dhexeeya calaacashaada si aad u sameysid urka dabiiciga ah.
Hubso inaadan urin kiimiko, xayawaano kale, ama aalkolo.
Hirgelinta xeerarkan waxay damaanad qaadi kartaa nabadda kaniisadda iyo, natiijada, boqolkiiba wanaagsan ee bakaylaha badbaadada. Xasuusnow in dhibaatadu ay sahlanaato si looga hortago wax ka qabashada dhibaatooyinka.
Video: bakayle cunay bakayle